Imibuzo Yokubuza Ngaphambi kokuba Ujoyine iqela lePagan
Imibuzo Yokuzibuza Ngaphambi kokuba Ujoyine iqela lamaPagan
Ufumene iqela lePagan, i-Wiccan coven, i-Druid grove, okanye enye inhlangano ocinga ukuba ilungile kuwe-enyanisweni, i-PERFECT !! - kwaye bacele ukuba ujoyine. Ngoko ngoku wenza ntoni? Ngaphambi kokuba utsho ewe, qiniseka ukuba uzibuze le mibuzo elandelayo:
1. Ngaba ndiyakuzalisekisa ukuzinikela kwexesha elifunekayo kum?
Iqela okanye iqumrhu lingabinemithwalo ethile ekufuneka ilungu layo lizalisekise.
Ngaba unokubonisa ngexesha kwaye uzilungiselele iintlanganiso? Ngaba unayo ixesha namandla okuzinikela ekufundeni , ekufundeni nasekufundeni naziphi na iimfuno ezilungiselelwe amalungu? Ukuba iqela lakho lidibana yonke iMigqibelo, kodwa yilelo suku abantwana bakho banomdlala webhola lebhola, ngaba uya kunyanzelwa ukuba ukhethe phakathi kweqela lakho kunye nosapho lwakho? Ukuba awukwazi ukunikela inani elifunekayo leli qela, kusenokuba ubulumko ukujoyina nje okwamanje. Qinisekisa ukuba ufumana umgca wokucwangcisa ngaphambi kokuba uzinikele ekubeni uthi yebo.
2. Ngaba ndingayilandela imithetho kunye nezikhokelo zeqela?
Kwizithethe ezininzi, iimfihlelo zeqela zifungile kwaye ziqalile - oko kuthetha ukuba awukwazi ukubuyela ekhaya uze uqhube umlingane wakho malunga nazo zonke izinto ozenzayo kwisithethe. Kwakhona akuqhelekanga ukuba iqela lifune ukuba amagama omalungu agcinwe yimfihlo. Ukuba awukwazi ukumelana nembono yokungabelani ngeemfihlelo zakho ezintsha kunye nosapho kunye nabahlobo, unokufuna ukuyeka ukujoyina iqela elifuna ukufihlakelelwa kunye nemfihlo yamalungu ayo.
Ingaba iqela / iventi inesethi yomthetho ? Kufuneka ukwazi ukuwalandela - ukuba awukwazi, ungadinga ukunikezela leli qela. Ngakolunye uhlangothi, ukuba iqela linomlinganiselo ongekho ngokwemigangatho yemigangatho apho amalungu agcinwe khona, kwaye izinto zigqitywa kwimeko ngamatyala, kungakufanelekile ukuqwalasela - inxalenye yeflip kuloo nto ngamanye amaxesha, ngokungabikho lwemithetho, kukho uhlaselo.
3. Ngaba ndinokuqhubeka ndihambelana nabo bonke abakweli qela?
Iinguqu zeqela ziyinto ekhohlisayo, ngakumbi xa "ungumntu omtsha" kwintlangano ekhoyo. Kubalulekile ukufumanisa ukuba unako ukuhamba kunye nomntu wonke, kungeku nje ngoku kodwa kamva. Ukuba kukho ilungu elinye elikugubungela indlela engafanelekanga, qwalasela ukuba yintoni into onokuhlala nayo, okanye ukuba iya kukwenza ukuba uxoxe kwaye ube nomsindo emva koko. Gqiba oku phambi kokuba uzinikele. Ngokuxhomekeke kwindlela amanye amalungu eqela abheka ngayo lo mntu, unokuba ungaphaya kwezinye iingxaki ezingaphezulu kweendlela. Jonga izibonakaliso zokulumkisa kwiindawo eziza kuba ngama-covens.
4. Ngaba ikhona indawo yokuba ndikhule ngokomoya kwaye ndiqhubele phambili kwizifundo zam?
Ngaba amalungu alindeleke ukuba afunde kwaye akhule, okanye ngaba uMbingeleli Omkhulu / umPristi Ophezulu ufuna nje iqela labalandeli? Ukuba ngaba ngowokugqibela, kwaye akukho ndlela ehleliweyo yokuqhubela phambili ngokomoya, kuya kufuneka ucinge ngento onokuyifumana ngokujoyina eli qela. Akufanele kuphela ilungu ngalinye lilethe into ebalulekileyo kwiqela, kodwa iqela lifanele libonelele ngenzuzo ngokubuyisela. Ukuba ufuna ukuqhubela phambili kwaye ufunde, kodwa konke okunikezelwayo kuyithuba lokuba yingxenye yeqela le "Weekend Wiccan", unokufuna ukucinga kwakhona.
Ngaba eli qela likhuthaza ukukhula ngokomoya, ukuxhotyiswa kobuqu, kunye nethuba lokuba yinxalenye yoluntu olukhulu lwasePagan?
5. Ukuba kukho into eyenzekayo kwaye ndikhetha ukushiya iqela okanye iqumrhu, ngaba liya kwamkelwa?
Ngokwesiko, ukuba ilungu lishiya iqela lamaPagani ngokuma kakuhle, amagama abo asuswa kwikota yeqela, izixhobo zabo zemilingo zibuyiselwe kubo, kwaye zithunyelwa kwihlabathi ngeentsikelelo ezifudumeleyo. Ngezinye iinkalo, kunjalo, iqela / iqumrhu lingenza kube nzima ukuba amalungu ahambeyo. Ukuba iqela okhangeleyo lenza naluphi na ukukhankanywa kokubangela inkathazo ngamalungu ashiya (phulaphula igama elithi " Wobungqina beMagqabi " apha), kuya kufuneka ucinge ngokubhekiselele ukuba ngaba leliqela lifuna ukuba yinxalenye . Buza amalungu angoku ukuba kukho nawaphi na amalungu angaphambili onokuthetha nabo ngamava abo.
6. Ngaba intsapho okanye iqabane lam liza kundixhasa kwisigqibo sam sokujoyina iqela okanye iqumrhu?
Kungakhathaliseki indlela yakho yokomoya, kulula kakhulu ukuhamba ukuba abantu abakuthandayo bayamxhasa. Ukuba ufumene iWicca kunye nomlingane wakho okanye umzali ukhathazekile malunga nawe unokutshisa kwiHerhena, unokufumana ingxaki. Nangona kubalulekile ukufumana iindlela zokukhula ngokomoya kunye nentsebenziswano nabantu abanomdla ofanayo, kubaluleke ngokufanayo ukugcina ukuvumelana ekhaya lakho. Ungadinga ukubamba ngokujoyina iqumrhu okanye iqela uze uxoxe ngokuthe ngqiqo ngesihloko kunye nosapho okanye iqabane lakho kwaye udibanise nayiphi na inkxalabo abanokuba nayo. Qiniseka ukuba ufunda malunga nemitshato yokuhlala enkolweni.
Ukwenza isigqibo sokugqibela
Ukuba unako ukuphendula ngokunyanisekileyo "ewe" kuyo yonke into engentla apha, oku kungenokuba iqela elifanelekileyo. Yamkele ukunikezelwa kobulungu ngesisa nesidima, kwaye wenze konke okusemandleni akho ukuxhasa ukuphela kwakho kwesifungo seqela. Emva kwakho konke, iqela / iventi yintsapho encinci, yinto engcono - kuba ufuna ukukhetha intsapho yakho yokomoya!
Qinisekisa ukuba ufunda ngobomi bombhoxo ngokubhekiselele kumsebenzi wokuzimela ukuba ukhangele iinjongo kunye nemivalo nganye.
Ukuqalisa njengePagan okanye iWiccan
AmaPagan kunye nePolyamory
Yintoni i-Mercury Retrograde?
I-Basketfast Handing Basket (Iintsikelelo Ezilishumi Nantathu)
Izilwanyana zamandla, izilwanyana zeTotem kunye neMoya yezilwanyana
Icandelo leQumrhu laseJamani labaQaleli Isifundo
Abangu-10 abaPhambili boBawo baseMelika
Iindlela ezimbini zokufumana i-Zinc Metal
Indlela yokwenza i-Slappy igaya kwi-Skateboard
Iifomati zeGolom Tournament, iMidlalo yeMidlalo kunye neeBets zeGalofu
IYunivesithi yaseConordia - i-Nebraska Admissions
I-Ahnentafel: I-Systemalog Numbering System
Indlela yokufunda nokubhala iiFayile kwi-Perl
Iinguqulelo eziphezulu zithi "Woza, Nonke Nina Nithembekileyo"
Inkcazo kunye neMimiselo kwiRhyme kwiProse and Poetry
Rechazo de la ukusikisela kwe-tarjeta de residencia
I-Zero Copula (igrama)
Indlela iViola Desmond ejongene ngayo noLuntu kwiCanada